USB stick စမ်းသပ်ခြင်း - နှိုင်းယှဉ်လျှင်အကောင်းဆုံး5GB USB ချောင်း ၅ ချောင်း
နေအိမ်/အကြံပေးသူ/နှိုင်းယှဉ်လျှင်အကောင်းဆုံး USB ချောင်း ၅ ချောင်း5GB - USB stick စမ်းသပ်ခြင်း
Vangelis1 ။ မတ်လ 2020
USB stick သည်ယနေ့လူကြိုက်အများဆုံး storage media တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအိမ်ရာအတိုင်းအတာများရှိနေသော်လည်း၎င်းတွင်အချက်အလက်များစွာ gigabytes ကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ ဤသေးငယ်သောဒေတာမှတ်ဥာဏ်များသည်ဒေတာအမြောက်အမြားကိုလွယ်ကူစွာသယ်ယူပို့ဆောင်စေပြီးကွဲပြားသောအဆုံးကိရိယာများအကြားချောမွေ့စွာလဲလှယ်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ USB stick စမ်းသပ်မှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားချက်များကိုထောက်ပြလိုပါသည် ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များ အသေးစိတ်ကိုနည်းနည်းအသေးစိတ်သွားပြီး ၀ ယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမင်းအတွက်ပိုလွယ်အောင်လုပ်ပါ။ USB stick များစွာသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူညီဘဲသိုလှောင်နိုင်စွမ်းနှင့် အော်ဟစ်ဖတ်နှုန်း eine wichtige Rolle ။
SanDisk Ultra 256GB USB Flash Drive USB 3.0 အထိ 130MB / s အထိရှိသည်
Intenso 3531492 Ultra Line 256GB memory stick USB3ငွေရောင်
SAMSUNG MUF-256AB / EU FIT Plus 256 GB Type-A USB 3.1 Flash Drive, Gunmetal Grey
256GB JetFlash 790 USB 3.1 Gen 1 USB Stick TS256GJF790K ကိုကျော်လွန်ပါ
1,07 x ကို 2,21 x ကို 5,61
X ကိုက x31,4 0,5 စင်တီမီတာ
X ကိုက x 5,9 1,7 0,7 စင်တီမီတာ
X ကိုက x 0,7 1,9 2,4 စင်တီမီတာ
6,36 x ကို 2,12 x ကို 1,06
တစ်ချက်ကြည့်လျှင်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံး5GB USB ချောင်း ၅ ချောင်း
1 တစ်ချက်ကြည့်လျှင်အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံး5GB USB ချောင်း ၅ ချောင်း
2 SanDisk Ultra 256GB USB Flash
3 SanDisk Ultra Fit 256 GB flash drive
4 Intenso USB stick Ultra Line 256 GB USB 3.0 ဖြစ်သည်
5 SAMSUNG MUF-256AB / အီးယူ
6 256GB JetFlash ကိုကျော်လွန်ပါ
7 USB ချောင်းများကိုဘာအတွက်သုံးလို့ရလဲ။
8 USB ချောင်းတွေရဲ့အမျိုးအစားတွေကဘာတွေလဲ။
9 USB stick ဘယ်မှာသုံးလို့ရလဲ။
10 PC / မှတ်စုစာအုပ်
12 WiFi အင်တာနက် router
13 TV / ပတ် ၀ န်းကျင်စနစ် / လက်ခံသူ
14 ကား hi-fi
15 USB ချောင်းများအတွက်မည်သည့်သိုလှောင်မှုပမာဏရှိပါသလဲ။
17 USB stick တွင်အဘယ်အရာကိုသိမ်းဆည်းနိုင်သနည်း။
18 USB stick ၀ ယ်တဲ့အခါငါဘာသတိထားရမလဲ။
19 USB stick ၏သိုလှောင်မှုပမာဏ
20 USB stick ၏အမြန်နှုန်း
21 USB stick တစ်ခုပါ ၀ င်သည်
SanDisk Ultra 256GB USB Flash
ပုံမှန် USB 10 ထက် ၁၀ ဆပိုမြန်သည်
ရုပ်ရှင်အပြည့်အစုံကိုစက္ကန့် ၄၀ အတွင်းလွှဲပြောင်းပါ
-14,00 EUR 42,99 EUR
SanDisk Ultra 256GB USB 3.0 flash drive သည်နာမည်ကျော် USB stick တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရောင်းကိန်းဂဏန်းများသည်သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောဆိုကြသည်။ ၎င်းသည် USB 2.0 နှင့် USB 3.0 အသုံးပြုနိုင်သည်။ လွှဲပြောင်းနှုန်းမှာ 100 MB / sec ဖြစ်သည်။ Stick ပေါ်တွင်အချက်အလက်များသိမ်းဆည်းရန်လုံလောက်မြန်သည်။
ပါ ၀ င်သော SanDisk SecureAccess ဆော့ဝဲပါ ၀ င်ခြင်းဖြင့်သင်၏ဒေတာများကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကာကွယ်နိုင်သည် စကားဝှက်။ ဆိုလိုသည်မှာ data carrier များအပါအ ၀ င်သင်၏ဒေတာများကိုအမြဲကောင်းစွာကာကွယ်ထားပြီးမည်သူမျှ၎င်းအားမသုံးနိုင်ပါ။
SanDisk Ultra USB 3.0 Flash Drive သည်သိုလှောင်မှုပမာဏ 256 GB ရှိပြီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်5CM အရွယ်အစားနှင့် 18 g အလေးချိန်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ဤချောင်းကိုအလွန်ပေါ့ပါးစေပြီးဥပမာအားဖြင့်သော့ချိတ်တွင်တွဲနိုင်သည်။
USB 10 ထက် ၁၀ ဆပိုမြန်သည်
ရရှိနိုင်သောစွမ်းရည်များ 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB နှင့် 512GB
SanDisk Ultra Fit 256 GB flash drive
SanDisk SecureAcces- နှင့် RescuePRO Deluxe software တို့မှသင်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရယူနိုင်ပြီးမည်သည့်ပြဿနာမှမရှိဘဲပြန်လည်ရယူပေးသည်။
သင်၏ USB drive သည်သင့်အားလျင်မြန်သော data transfer နှင့် read speed 130 MB / s ကိုပေးသည်။
-23,22 EUR 37,77 EUR
SanDisk Ultra Fit 256 GB flash drive သည်အလွန်မြန်သည်။ လိုအပ်သော hardware နှင့်အတူမြန်နှုန်း 130MB / sec အထိရှိသည်။
ဤကျစ်လစ်မြန်နှုန်းမြင့် USB 3.1 flash drive ကိုလက်ပ်တော့များ၊ ဂိမ်းစက်များ၊ ကားအသံစနစ်များနှင့်အခြားအရာများအတွက် plug-and-stay storage အဖြစ်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ရိုးရှင်းမြန်ဆန်သောနည်းလမ်းသည်သင်၏ device သိုလှောင်မှုပမာဏကို 256GB အထိချဲ့ထွင်ရန်ဖြစ်သည်
အမြန်နှုန်း ၁၃၀ MB / စက္ကန့်အထိဖတ်ပါ။
သမားရိုးကျ USB 15 flash drive များထက် ၁၅ ဆပိုမြန်အောင်ရေးပါ
စက္ကန့် ၃၀ အောက်၌အစအဆုံးရုပ်ရှင်ကားများကို drive သို့လွှဲပြောင်းခွင့်ပြုသည်
Intenso USB stick Ultra Line 256 GB USB 3.0 ဖြစ်သည်
ဒေတာကူးပြောင်းနှုန်းအများဆုံး ၇၀ MB / s အထိ
အလေးချိန် ၁၆ ဂရမ်; အရွယ်အစား - ၆၄ x ၁၈ x ၁၁ မီလီမီတာ
-13,00 EUR 22,99 EUR
Intenso Alu လိုင်းနှင့် 256 GB ကို USB stick သည် USB 3.1 interface နှင့် anthracite အရောင်ဖြင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သည့် stick ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ရုပ်ရှင်များသို့မဟုတ်သီချင်းများကဲ့သို့ဒေတာများစွာကိုသိုလှောင်နိုင်သည့်သိုလှောင်မှုပမာဏ 256 GB ကိုပေးသည်။ အဲဒီအပေါ်မှာကယ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်မင်းဘယ်သွားသွားမင်းရဲ့အချက်အလက်တွေကိုမင်းနဲ့အတူယူသွားနိုင်တယ်။
ဤတုတ်ဖြင့်လွှဲပြောင်းမှုနှုန်းသည် 70 MB / s ကို သင်၏ဒေတာများကိုအပြန်ပြန်အလှန်လှန်လျင်မြန်သည်။ သတ်မှတ်သည် အရှိန် တစ်ခုနှင့်သာရှိသည် USB3ပါ Interface ဖြစ်နိုင်သည်။
အလေးချိန်:6ဂရမ်
အရွယ်အစား: 59 x 17 x7မီလီမီတာ
Superspeed USB 3.0(အောက်ဘက်နှင့်လိုက်ဖက်သည်)
SAMSUNG MUF-256AB / အီးယူ
အားကောင်းသောစွမ်းဆောင်ရည် - USB 300 interface (USB 3.1 နှင့် 3.0 တို့နှင့်နောက်ပြန် တွဲ၍ ဖတ်နိုင်သောအမြန်နှုန်း 2.0 MB / s အထိ)
ရေရှည်သုံးခြင်း၊ လက်ပ်တော့များ၊ စမတ်တီဗီများသို့မဟုတ်ကားများတွင်တုတ်၏မရည်ရွယ်ဘဲထိခိုက်မှုဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါးခြင်း
-4,91 EUR 51,91 EUR
SAMSUNG MUF-256AB / EU သည်သေးငယ်ပြီးခေတ်မီသောဒီဇိုင်းဖြင့် USB 3.1 flash drive တစ်ခုဖြစ်သည်။ USB 300 ပါသော ၃၀၀ MB / s အထိကြီးမားသော read speed ကိုရရှိစေသည်။ USB flash drive မှ ၃ GB ဖိုင်ကို ၁၀ စက္ကန့်အတွင်းသင်၏ PC (သို့) laptop သို့မိတ္တူကူးနိုင်သည်။
သိုလှောင်မှုပမာဏသည် 256 GB ဖြစ်ပြီးသင်၏အရေးအကြီးဆုံးဖိုင်များကိုသင်နှင့်အတူယူဆောင်သွားနိုင်သည်။
ထို့အပြင်ဤ USB သည်ငါးဆကာကွယ်မှုကိုပေးသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ရေလုံ၊ shockproof၊ သံလိုက်ခံနိုင်ရည်၊ အပူချိန်ခံနိုင်ရည်နှင့် X-ray သက်သေခံပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
USB 300 interface (USB 3.1 နှင့် 3.0 တို့နှင့်နောက်ပြန် တွဲ၍ ဖတ်နိုင်သောအမြန်နှုန်း ၃၀၀ MB / s အထိ)
ရေရှည်သုံးခြင်း၊ လက်ပ်တော့များ၊ စမတ်တီဗီများသို့မဟုတ်ကားများတွင်တုတ်၏မတော်တဆထိခိုက်မှုဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါးပြီး၎င်း၏ကျစ်လစ်သောအတိုင်းအတာကြောင့်
သင်၏ဒေတာအတွက်နေရာများစွာ၊ သိုလှောင်မှုပမာဏ 256 GB အထိ
256GB JetFlash ကိုကျော်လွန်ပါ
USB 3.1 ကို 1 Gen XNUMX interface ကို
ဆွဲထုတ်နိုင်သော USB connector နှင့် Capless ဒီဇိုင်း
Transcend's JetFlash 790 တွင်သိုလှောင်မှုပမာဏ 256 GB ရှိပြီးအဖြူအမည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
Transcend Elite ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ (ဖ်) ဝဲအားအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်
ထုတ်လုပ်သူသည်ဤ USB stick ကို capless slide-out ဒီဇိုင်းဖြင့်ပေးသည်။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ဒေတာတွေကိုအပြင်ကကာကွယ်ပြီးဘယ်နေရာမဆိုသယ်သွားနိုင်တယ်။
ထို့အပြင်သင်၏ Transcend Elite ကိုသင်၏ဒေတာများကိုစီမံနိုင်သောထုတ်လုပ်သူ၏ပင်မစာမျက်နှာတွင်အခမဲ့ပေးသည်။
Transcend Elite သည် MacOS, Windows OS နှင့် Android တို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပြီးအရံနှင့်ပြန်လည်ရယူရေးလုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ဒေတာအသွင်ဝှက်ခြင်း၊ ဖိုင်တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် cloud backup ပြုလုပ်ခြင်းတို့ကိုပေးသည်။
sandisk ultra 256gb usb flash drive ဖြစ်သည်
တစ်ဦးအတွက် USB ချောင်း ၎င်းသည်ပုံမှန်တစ်ခုဖြစ်သည် ဖြုတ်နိုင်သော disk အစပိုင်းမှာဒီတုတ်တွေကို PC ဧရိယာမှာသာသုံးခဲ့တယ်။ ဤတွင်သင်သည် floppy disk ၏ထိုက်တန်သောဆက်ခံသူနှင့်နောင်တွင်ပြန်လည်ရေးနိုင်သောတစ်ခုလည်းရှိသည် CD (သို့) DVD စတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုအတောအတွင်းအခြားဒစ်ဂျစ်တယ်အဆုံးကိရိယာများသည်လည်းဤသိုလှောင်မှုမီဒီယာမှအကျိုးခံစားနေရသည်။ အောက်ပါတို့၌အရေးအပါဆုံးအသုံးပြုမှုကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြလိုပါသည်။
ဒေတာသိုလှောင်မှု USB ချောင်းများကို data storage media အဖြစ်သုံးနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤဒေတာသည်အခြားကိရိယာများနှင့်လဲလှယ်ရန်လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဒေတာအရံသိမ်းခြင်းအတွက်သာဖြစ်စေအရေးမကြီးပါ။
ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများအတွက်ဗန်း ကျယ်ပြန့်သော ဓာတ်ပုံစုစည်းမှု သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုများကို အိမ်တွင် ယူဆောင်သည်။ hard disk ကွန်ပြူတာသည် memory အများအပြားယူသည်။ သို့သော်လည်း၊ ဟာ့ဒ်ဒရိုက်ရှိ ဤနေရာလွတ်သည် အလွန်သေးငယ်သွားပါက၊ လူအများအပြားသည် သင့်လျော်သောသိုလှောင်မှုပမာဏနှင့်အတူ USB stick တွင် ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများကို အခြားအရာများအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားကြသည်။
သီချင်းဖိုင်များသိုလှောင်ခြင်း USB ချောင်းများသည်ကျယ်ပြန့်သောတေးဂီတစုစည်းမှုများသိုလှောင်ရန်ဥပမာ၊ MP3 format ဖြင့်
အခြားကိရိယာများနှင့်ဒေတာဖလှယ်ခြင်း ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သော Dဒေတာ၊ ရုပ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများ သို့မဟုတ်ဂီတဖိုင်များကို USB stick သုံး၍ အလွယ်တကူသယ်ယူသွားပြီးအခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ကိရိယာသို့လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကွန်ပျူတာနှစ်ခုအကြားလဲလှယ်ရုံတင်မကဘဲရုပ်မြင်သံကြား၊ Hi-Fi စနစ်၊ MP3 ဖွင့်စက် သို့မဟုတ်ကားရေဒီယိုသို့ တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်မှာသိုလှောင်မှုပုံစံကိုအခြားအဆုံးကိရိယာများမှစီမံနိုင်ပြီးဤကိရိယာများတွင်အခမဲ့ USB port တစ်ခုရရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုတွင်သိုလှောင်နိုင်စွမ်းကိုမသွားခင်ဖွဲ့စည်းပုံကိုအကျဉ်းချုပ်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ USB stick တစ်လုံး၏အရေးအကြီးဆုံးထူးခြားချက်မှာ၎င်းဖြစ်သည် USB host ကိုချိတ်ဆက်ပါr သည်aမှတဆင့်အမှန်တကယ် connector ဖြစ်သည် USB port ကိုယ်စားပြုတယ်။
USB stick တစ်ခုတွင် semiconductor ဒြပ်စင်တစ်ခုတွင်တပ်ဆင်ထားသည့် flash memory ဆဲလ်များရှိသည်။ ဒါတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတယ် host connector ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ဆီလီကွန် flash memory ဆဲလ်တွေရဲ့သဘောသဘာဝ၊ အရင်းအမြစ်နဲ့ရေဆင်းဧရိယာတွေ၊ ရေပေါ်တံခါးတွေကို insulator တစ်ခုအနေနဲ့ငါတို့ဒီထက်အသေးစိတ်မသွားချင်ပါဘူး။
ထူးခြားချက်ကပိုအရေးကြီးတယ် လိုက်ဖက်တဲ့ဂီယာအမြန်နှုန်းကိုလည်း ဦး တည်သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါစံနှုန်းများကိုခွဲခြားရန်ရှိသည်။
USB 1.0 / 1.1: ဤစံနှုန်းသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်များမှ စ၍ ပရင်တာများ၊ ကီးဘုတ်များ၊ ကြွက်များနှင့်စကင်နာများကိုကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အဓိကရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ USB 90 သည် RS1.0 interface သို့မဟုတ် LPT interface ကိုအစားထိုးသင့်သည်။ USB standard 232 ကိုမကြာမီတွင်တီထွင်ခဲ့သည်။ လွှဲပြောင်းနှုန်းသည် 1.1 Mbit / s သာရှိသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ဤစံနှုန်းသည်အရေးမပါတော့ဘဲအောက်သို့လိုက်ဖက်မှုရှိနေသေးသည်။
USB 2.0- USB 2.0 စံကိုနောက်ဆုံးတွင်ပြင်ပသိုလှောင်မှုမီဒီယာနှင့် USB stick တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်တီထွင်ခဲ့သည်။ ဤဆက်သွယ်မှုသည် 480 Mbit / s အမြန်နှုန်းဖြင့်ဒေတာများကိုပထမဆုံးအကြိမ်လွှဲပြောင်းနိုင်စေခဲ့သည်။ သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ USB 2.0 သည် USB 1.1 ထက်လေးဆပိုမြန်သည်။ ယနေ့ထိ USB 2.0 သည် USB memory stick များအတွက်စံဖြစ်သည်။
USB 3.0- USB 3.0 စံသည်နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကိုယ်စားပြုပြီး ၄ GBit / s အထိမြင့်မားသောထုတ်လွှင့်မှုအမြန်နှုန်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ဤအကူးအမြန်နှုန်းအတွက် USB ချောင်းများကိုအထူးမှတ်သားရမည်။ ကွန်ပျူတာအားလုံးသည်ခေတ်မီ interface ကိုတပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိသေးပါ။
ဒါပေမယ့်aရဲ့အပြင်ပိုင်းတည်ဆောက်ပုံမှာကွဲပြားမှုတွေကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ် USB တုတ်များမရ။ ပုံမှန်စံအတိုင်းအတာအပြင်၊ သေးငယ်တဲ့ဒီဇိုင်းလှည့်ကွက်တွေကိုအမှတ်ရစေတဲ့အထူးသေးငယ်တဲ့တုတ်များ (သို့) ဒီဇိုင်းများလည်းရှိပါတယ်။ ဤမှတ်ဥာဏ်ချောင်းများကိုယခုအခါသင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်များ (သို့) အိမ်များအပြင်ဘက်တွင်ပုံနှိပ်နိုင်ရန်အတွက်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်များကိုယခုအခါစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။
အများအားဖြင့်ဒါပါပဲ USB host connector၊ ဒါကြောင့်ပလပ်ကိုတစ်ခုထဲနဲ့ထားပါ ကာကွယ်ထားသောပလပ်စတစ်အဖုံးမရ။ ၎င်းကိုအသုံးမပြုမီအမြဲတမ်းဖယ်ရှားပြီးကံမကောင်းစွာဖြင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ အချို့ stick ထုတ်လုပ်သူများသည် plug plug ကိုတစ် ဦး ချင်းပြန်ရုပ်သိမ်း (သို့) ချဲ့ထွင်နိုင်ရန် slider ကိုသုံးသည်။
တခါတရံမှာသင်ဟာအတော်လေးထူးခြားတဲ့အရာတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် USB ချောင်းတွေ၊ ဥပမာအနေနဲ့ သော့ကွင်းဆက်၊ ballpoint pens (သို့) အခြားအသုံးဝင်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများအဖြစ်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ စိတ်ကူးသည်အကန့်အသတ်မရှိသိသည်။
ဒါခေါ်တာတော်တော်ရှားပါတယ် Duo USB ချောင်းများ ဒါတစ်ခုပါ မမ်မိုရီစတစ်ဒါကတစ်ဖက်မှာသမားရိုးကျတစ်ခုရှိတယ် USB ပလပ် အခြားတစ်ဖက်တွင် micro USB connector တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော Micro USB ချောင်း သို့သော်၎င်းကိုများစွာသော end devices များကမထောက်ပံ့သေးပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအသုံးချမှုနယ်ပယ်မှာဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများနှင့်ကင်မရာများဖြစ်သည်။
USB stick ဘယ်မှာသုံးလို့ရလဲ။
ငါတို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုမှာငါတို့တွေ့ခဲ့ပြီးသားအတိုင်းပဲ၊ အဲဒါတစ်ခုပဲ USB ချောင်း flash memory နည်းပညာကို အခြေခံ၍ passive data carrier တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆုံးကိရိယာတွင်သင့်တော်သော USB port ကိုရနိုင်သောနေရာတိုင်းတွင်ဤတုတ်များကိုအခြေခံအားဖြင့်သုံးနိုင်သည်။ အောက်ပါ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အဆုံးကိရိယာများကို USB stick တစ်ခုနှင့်အတူတကွလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကိုအကျဉ်းချုပ်ရှင်းပြလိုပါသည်။
PC / မှတ်စုစာအုပ်
USB stick ကိုသုံးသောအရေးကြီးဆုံးနေရာသည်အိမ်သုံး PC သို့မဟုတ် notebook ဖြစ်သည်။ ဤတွင်သင်သည်ဒေတာအမြောက်အမြားကိုထုတ်ယူနိုင်ပြီးအခြားကွန်ပျူတာတစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူစွာသယ်ယူနိုင်သည်။ ခေတ်မီကွန်ပျူတာအားလုံးနီးပါးတွင်အခမဲ့ USB port ရှိသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောစံနှုန်းများကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုသတိပြုပါ USB 1.1 မှ USB 3.0 ကွဲပြားသောကူးစက်မြန်နှုန်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ခေတ်မီပုံနှိပ်စက်တစ်လုံးမှမရှိ USB port ကွန်ပျူတာသို့ပရင်တာဆက်သွယ်မှုအတွက်သာမက memory stick အတွက်အပို USB port တစ်ခုပါရှိတတ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ USB stick မှစာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများကိုထုတ်ယူနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကွန်ပျူတာကိုပင်မလိုအပ်တော့ပါ။
WiFi အင်တာနက် router
ခေတ်မီကြိုးမဲ့အင်တာနက် router တော်တော်များများမှာတစ်ခုရှိတယ် USB အပေါက်၊ USB stick တစ်ခုနှင့်လည်းချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ လူသိများသောဥပမာတစ်ခုမှာ FritzBox ဖြစ်သည်။ Fritzbox အကြောင်း လက်ခံရရှိသောနေရာတွင်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့် memory stick တွင်သိုလှောင်ထားသောဒေတာများကိုသင်ရယူနိုင်သည်။ router တစ်ခုတွင် USB stick ကိုအပိုကြားခံအဖြစ်လည်းသုံးနိုင်သည်။ အားလပ်ရက်ခရီးသို့လွှဲပြောင်းသောဓာတ်ပုံများသည်အထူးလုံခြုံသည်။
TV / ပတ် ၀ န်းကျင်စနစ် / လက်ခံသူ
ခေတ်မီမျက်နှာပြင်ပြားရုပ်မြင်သံကြားစက်များနှင့်တွဲပါ ၀ င်သောပတ်လည်စနစ်များတွင် memory stick တစ်ခုထည့်သွင်းနိုင်သော USB port တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ တီဗီ set တစ်ခုတွင်အသံသွင်းစက်တစ်ခုအဖြစ် USB stick ကိုမကြာခဏသုံးလေ့ရှိသည်။ သင်လိုအပ်လျှင်အရည်အသွေးမြင့်ရုပ်ရှင်များကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပြီးထိုနေရာမှပြန်ကစားနိုင်သည်။ ပတ် ၀ န်းကျင်စနစ်များတွင်၊ သင်ဤနေရာတွင်သီချင်းဖိုင်များနှင့်အတူတုတ်ကိုတီးနိုင်ရန် USB port ကိုအများအားဖြင့်သုံးသည်။
ထူးခြားတာတွေလည်းရှိတယ် SAT လက်ခံသူ၊ ၎င်းတွင် USB port တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ USB stick ထည့်ထားသောဒစ်ဂျစ်တယ်ဗွီဒီယိုဖမ်းစက်အဖြစ်လည်းလုပ်ဆောင်သည်။ လက်ခံသူများမှတဆင့်ရုပ်ရှင်များနှင့်အခြားပံ့ပိုးမှုများကိုသင်သိမ်းဆည်းနိုင်ပြီးသင်ဆန္ဒရှိလျှင်၎င်းတို့ကိုပြန်ကစားနိုင်သည်။ အချို့အခြေအနေများတွင်သင်သည်တီဗီတွင်အခြားရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုကိုကြည့်လျှင်၎င်းသည်ပင်အလုပ်လုပ်သည်။
ခေတ်သစ်ကားရေဒီယိုများသည်ယခုအခါမာလ်တီမီဒီယာဘူတာရုံများသာဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ USB port တစ်ခုဒီနေရာမှာမပျက်သင့်ပါဘူး။ MP3 player တစ်ခု၊aကိုသာသုံးနိုင်သည် ဘလူးတုသ်အားသွင်းရန်ချိတ်ဆက်မှု (သို့) စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး၊ USB stick တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ ၎င်းကိုသီချင်းဖိုင်များဖွင့်ရန်ပုံမှန်နည်းလမ်းဖြင့်သုံးသည်။
ထုတ်လွှင့်မှုအမြန်နှုန်းအပြင် USB stick အတွက်အရေးကြီးသော ၀ ယ်ရမည့်စံနှုန်းသည်သိုလှောင်မှုပမာဏဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ stick ပေါ်မှာ data တွေအားလုံးကိုစိတ်ချယုံကြည်စွာသိုလှောင်ထားနိုင်ဖို့မင်းမှာလုံလုံလောက်လောက်ကြီးမားတဲ့အရန်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာသေချာပါစေ။ ဒေတာသယ်ဆောင်သူ (USB stick) ပြည့်နေသည်ကိုမိတ္တူကူးနေစဉ်မော်နီတာပေါ်တွင်သတင်းတစ်ခုပေါ်လာလျှင်၎င်းသည်အမြဲစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်။
ဂျာမနီတွင်သင်သည် megabytes အနည်းငယ်မှကြီးမားသော gigabytes အထိအရွယ်အစားမျိုးစုံကိုရနိုင်သည်။ ဤနိုင်ငံတွင်မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိအမိန့်များရှိနေသေးကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အကျဉ်းချုပ်ပြလိုပါသည်။
32 MB (တောင်းဆိုချက်သာ)
64 MB (တောင်းဆိုချက်သာ)
128 MB (တောင်းဆိုချက်သာ)
256 MB (တောင်းဆိုချက်သာ)
512 ကို MB
2 GB ကို
4 GB ကို
8 GB ကို
16 GB ကို
32 GB ကို
64 GB ကို
128 GB ကို
256 GB ကို
512 GB ကို
8 နှင့် 64 GB ကြားမော်ဒယ်များသည်ယနေ့လူကြိုက်အများဆုံး USB ချောင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာအချိုးကိုပေးသည်။ သို့သော်ထိုအတောအတွင်း၎င်းသည်ဒေတာ ၁ terabyte ကိုပင်သိုလှောင်နိုင်သောတိုးတက်မှုအသစ်များရှိသည်ကိုလည်းလူသိများလာသည်။ ဒါပေမယ့်ဒါတွေကငါတို့နဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်မတည်ရသေးဘူး။
SanDisk Ultra 64GB USB Flash Drive USB 3.0 အထိ 130MB / s အထိရှိသည် လောလောဆယ်သုံးသပ်ချက်များမရှိပါ 8,92 EUR အမေဇုံမှာဝယ်ပါ
SanDisk Ultra Fit 128GB USB 3.1 Flash Drive လောလောဆယ်သုံးသပ်ချက်များမရှိပါ 14,99 EUR အမေဇုံမှာဝယ်ပါ
Intenso Speed ​​Line - 128GB memory stick - USB 3.2 Gen 1x1၊ အနက်ရောင် လောလောဆယ်သုံးသပ်ချက်များမရှိပါ 10,79 EUR အမေဇုံမှာဝယ်ပါ
USB ချောင်းများ၏ကြာရှည်ခံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားသောထုတ်ပြန်ချက်များရှိသည်။ ထုတ်လုပ်သူအများစုသည်အနည်းဆုံး ၁၀ နှစ်အာမခံသည်။ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကမှတ်ဥာဏ်ဆဲလ်တွေအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဟောင်းနွမ်းကုန်တယ်။ ဖတ်မှတ်ဉာဏ်သည်အကန့်အသတ်မရှိကြာရှည်လေ့ရှိသော်လည်းပုံစံပေါ်မူတည်ပြီး ၁၀၀၀၀ မှ ၁ သန်းခန့်အထိသတ်မှတ်ထားသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုမြှင့်တင်ရန်ပေါင်းစပ်ထိန်းချုပ်မှုများသည်ကွဲပြားသောမှတ်ဥာဏ်ဆဲလ်များကိုရေးခွင့်တစ်ခုစီအတွက်ရေးသည်။
၎င်းသည် flash memory ၏ကွဲပြားခြားနားသောအရည်အသွေးများရှိသည်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ NSr USB ချောင်းများ ထို့ကြောင့်၊ အများအားဖြင့် ဈေးသက်သာသော flash memory module များကို အသုံးပြုကြသည်။ SD ကတ်များ သို့မဟုတ် ခေတ်မီသော ကတ်များသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အရည်အသွေးကို ရရှိသည်။ SSD ကို- ဟာ့ဒ်ဒရိုက်များ။ အရန်ကြားခံအဖြစ် အသုံးပြုရန်အတွက် သင်သည် အရည်အသွေးမြင့် USB ချောင်းများကို အသုံးပြုသင့်ပြီး လိုအပ်ပါက အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုပြီးနောက် ၎င်းတို့ကို ပြောင်းလဲပါ။
USB ချောင်းတွေကကျေးဇူးတင်ပေမယ့် Plug-n-Play sအသုံးပြုရန်ချက်ချင်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီးအဆုံးသတ်ကိရိယာအများစု၏ drive တစ်ခုအဖြစ်လည်းအသိအမှတ်ပြုခံရသည်၊ စာရေးနေစဉ် (သို့) အပြီး၌ USB အပေါက်ကိုချက်ချင်းဆွဲထုတ်ခြင်းကိုရှောင်သင့်သည်။ မဟုတ်ရင် data တွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်။
USB stick ကိုသမားရိုးကျ hard disk drive ကဲ့သို့ပုံစံချနိုင်သည်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ သိုလှောင်ထားသောဒေတာအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းမလွှဲမရှောင်သာဖျက်ပစ်သည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် memory stick သည်ကွန်ပျူတာ၏ USB port တွင်ရှိရပါမည်။ ထို့နောက် drive letter မှတဆင့် formatting process ကိုစတင်နိုင်သည်။
၎င်းကို Windows ကွန်ပျူတာများတွင်ယနေ့ထိအသုံးများနေဆဲဖြစ်သည် FAT32 ဖိုင်စနစ် ကွန်ပျူတာ၏ operating system ကိုသုံးလျှင်ပင်အခြေခံအဖြစ်ရွေးချယ်သည် NTFS စနစ်ကိုပုံစံချပါt ရှိသည် FAT32 နှင့် USB မှတ်ဉာဏ်ချောင်းများသည်အနည်းဆုံးအောက်ဘက်နှင့်လိုက်ဖက်သည်။ အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်အဆုံးသုံးကိရိယာအများစုသည်ဤဖိုင်ကိုပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲနားလည်ကြသည်။
USB stick တွင်အဘယ်အရာကိုသိမ်းဆည်းနိုင်သနည်း။
USB ချောင်းများကိုကွန်ပျူတာများအားပုံမှန် drive တစ်ခုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားပြီးသက်ဆိုင်ရာ drive letter ဖြင့်မှတ်သားသည်။ သင်အဲဒီမှာရှိနိုင်ပါတယ်
စာရွက်စာတမ်းများ၊ Excel ဇယားများ၊ PDF များ (သို့) ဒေတာဘေ့စ်ဖိုင်များကဲ့သို့ဒေတာအားလုံးကိုသိမ်းပါ။
executable program files တွေကို save လုပ်ပါ။
အခြေခံအားဖြင့် USB stick သည် တစ်ခုနှင့်ဆင်တူသော ပြင်ပ drive တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြင်ပ hard drive. တခါတရံတွင် bootable operating system ကိုထိုကဲ့သို့သော stick တွင်သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် ဒီထက်မကရှိပါသေးတယ်။ setting များကို ကွန်ပျူတာ၏ BIOS တွင်လိုအပ်သည်။
USB stick ၀ ယ်တဲ့အခါငါဘာသတိထားရမလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နှိုင်းယှဉ်မှုပေါ်တယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရေးကြီးဆုံးဒေတာများနှင့်အတူ USB ချောင်းမျိုးစုံကိုတင်ပြသည်။ သင်ဤစာမေးပွဲအောင်မြင်သူတစ် ဦး ကိုမဆုံးဖြတ်မီကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အား ၀ ယ်ယူမှုစံနှုန်းအနည်းငယ်ပေးလိုပါသည်။ မင်းရည်ရွယ်ချက်အတွက်မှန်ကန်တဲ့ USB stick ကိုမင်းသေချာပေါက်ရှာတွေ့မှာသေချာပါတယ်။
USB stick တစ်ခုအားသင်မဆုံးဖြတ်မီသင်အဘယ်အရာကိုလိုအပ်သည်ကိုအတိအကျဆုံးဖြတ်သင့်သည်။ 8 GB အထိသေးငယ်သည့် USB stick များသည်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှအခြားတစ်ခုသို့ဖိုင်များကိုကူးယူရန်လုံလောက်သည်။ ဤတွင်သင်သည်စျေးမကြီးသောအခြားနည်းလမ်းများနှင့်လည်းပြန်လဲနိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်သင်သည်ကျယ်ပြန့်သောဒေတာစုဆောင်းမှုများ၊ ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကိုသိမ်းဆည်းလိုလျှင်၊ ကြီးမားသောစွမ်းရည်နှင့်ပထမတန်းစားအမှတ်တံဆိပ်အရည်အသွေးရှိသောမော်ဒယ်များကိုသင်မှီခိုသင့်သည်။ အဆုံးသတ်ကိရိယာအချို့သည်သိုလှောင်နိုင်စွမ်းအချို့ကိုသာအသိအမှတ်ပြုသည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ 256 GB နှင့် USB ချောင်းများသည်အမြဲမှန်ကန်စွာအသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဒေတာများလည်းဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
USB stick ၏သိုလှောင်မှုပမာဏ
USB ချောင်းများကိုသိုလှောင်မှုအရွယ်အစားများစွာတွင်ရနိုင်သည်။ ယနေ့ဒေတာပမာဏအနည်းငယ်အတွက် 8 GB မော်ဒယ်များကိုသုံးသည်။ ပုံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုသိမ်းဆည်းမည်ဆိုလျှင်များစွာသောသူတို့သည် 16 GB USB stick များကိုသုံးကြသည်။ 32 GB နှင့်အထက်ရှိသောတုတ်များသည်ဗီဒီယိုများနှင့်ကျယ်ပြန့်သောဓာတ်ပုံစုဆောင်းမှုများအတွက်မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
အကြီးဆုံး USB stick ကိုချက်ချင်းရွေးရင်အဲဒါထိုက်တန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မင်းမှာအရန်ငွေအလုံအလောက်ရှိသေးတယ်။ စျေးကွက်တွင်မီဂါဘိုက်အရွယ်တုတ်များများစွာရှိနေသေးသော်လည်း၎င်းတို့ကိုအနည်းငယ်သာသိုလှောင်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကိုမကြာခဏအစုံအဖြစ်အလွန်စျေးသက်သက်သာသာဖြင့်ကမ်းလှမ်းကြသည်။
သင်လုံခြုံသောဘက်တွင်နေလိုလျှင် 64 GB USB stick ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤကဏ္Inတွင်သင်စျေးနှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အချိုးကောင်းကိုသင်ယခုတွေ့ရှိနိုင်သည်။
USB stick ၏အမြန်နှုန်း
ဒေတာကိုတုတ်တစ်ချောင်းတွင်မည်သို့သိမ်းဆည်းနိုင်ပုံနှင့်၎င်းတို့အားစက်တစ်လုံးဖြင့်ပြန်ဖတ်နိုင်ပုံကိုရှာဖွေရန်အထူးအရေးကြီးသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများစွာသည်လက်တွေ့တွင်အမြဲမအောင်မြင်သောစိတ်ကူးဖတ်နိုင်မြန်နှုန်းကိုကြော်ငြာသည်။
စွမ်းရည်မြင့်အလွန်စျေးသက်သာသော USB ချောင်းများရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်အနိမ့်ထုတ်လွှင့်မှုနှုန်းကိုသာပေးသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်သေးငယ်သည့်တုတ်များသည်လျင်မြန်သောဒေတာကူးပြောင်းနှုန်းဖြင့်ယုံကြည်စေနိုင်သည်။
သိကြတဲ့အတိုင်း၊ ပု စာဖတ်နှုန်းမြန်နှုန်း အမြဲတမ်းစာရေးနှုန်းထက်သိသိသာသာပိုမြင့်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အချက်အလက်များကို controller မှတဆင့် flash memory သို့မည်သို့လွှဲပြောင်းပေးသနည်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အနှောင့်အယှက်မရှိသောအလုပ်ကိုဖွင့်ရန်သင်၌ရှိသင့်သည် USB ချောင်း အရမ်းကောင်းတယ်ရွေးပါ ငွေလွှဲခနှုန်းထားများ အာမခံပါသည်။
အမြန်နှုန်းသည် USB စံနှုန်းနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ memory stick တစ်ခု ၀ ယ်တဲ့အခါအနည်းဆုံးသူ့မှာအနည်းဆုံးရှိရမယ်ဆိုတာသေချာအောင်လုပ်သင့်ပါတယ် USB 2.0 စံ ထောက်ခံပါတယ်။ ခေတ်မီသည် USB 3.0 စံ ကံမကောင်းစွာဖြင့်များစွာသောအဆုံးကိရိယာများတွင်မတပ်ဆင်ရသေးပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် USB 3.0 အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော USB stick အများစုသည်နောက်သို့လိုက်ဖက်သည်ကိုကောင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်။
USB stick တစ်ခုပါ ၀ င်သည်
USB ချောင်းများသည်အလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအိမ်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်ရှိသောပလတ်စတစ်များကိုဤနေရာတွင်မကြာခဏသုံးသည်။ အချို့သောတုတ်များကိုလည်းအလူမီနီယမ် bezels များဖြင့်ပံ့ပိုးပေးထားသည်။ သို့သော်အခြားပစ္စည်းများအားလုံးကိုလည်းတောင်းခံနိုင်သည်။ သစ်သားအစစ်အမှန်များနှင့်သတ္တုမျက်နှာပြင်အမျိုးမျိုးမှပြုလုပ်သော USB ချောင်းများရှိသည်။
သေးငယ်သောအိမ်ရာသည်သင်၏တုတ်ကိုသင်၏အိတ်ကပ်ထဲသို့မည်သည့်အခါမဆိုသယ်ဆောင်လာနိုင်စေသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များဖြင့်နောက်ထပ်သေးငယ်အောင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်လျှင်တောင်မှမင်းလက်ထဲမှာသက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ USB ချောင်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူတပ်လို့ရမဲ့ stick တစ်ခုကိုရွေးသင့်တယ်။
မှတ်ဉာဏ်ချောင်းများသည်အများအားဖြင့်သင်အရင်ဖြုတ်ရန်ပလပ်စတစ်အဖုံးဖြင့်ကာကွယ်ပေးသည်။ သို့သော်၊ ပလပ်ကိုရှေ့သို့လျှောလျှောလျှောရှူရှူသို့တွန်းသွားနိုင်သည့်ပုံစံများသည်အလွန်လက်တွေ့ကျသည်။
အချို့ကုမ္ပဏီများသည်သင်၏ USB stick ကိုစိတ်ကြိုက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ထို့နောက်၎င်းတို့အားအလွန်များပြားသောအရောင်းမြှင့်တင်ရေးလက်ဆောင်များအဖြစ်ကောင်းစွာသုံးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်မှုတွင်ပလတ်စတစ်အိမ်အများစုကိုအလွန်ကြံ့ခိုင်စေရန်တည်ဆောက်ထားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနက်အချို့သည်ပိုမိုမြင့်မားသောဝန်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ကားတစ်စီးမောင်းလာရင်တောင်ဒီ USB stick ကနေအချက်အလက်တွေကိုစိတ်ချယုံကြည်စွာပြန်ဖတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သင် USB stick တစ်ခု ၀ ယ်လိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏နှိုင်းယှဉ်မှုပေါ်တယ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်မှုကိုကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ ဤတွင်သင်အလိုရှိသော USB stick ကိုစျေးသက်သက်သာသာမှာယူနိုင်သည်။
USB stick ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ အကြံဥာဏ်၊ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်အခြားအရာများ
လုံခြုံရေး၊ VPN client တစ်ခုနှင့် privacy ကိုကာကွယ်ပါ
SSL လက်မှတ်များမှတဆင့် ၀ ယ်ယူသူများနှင့်ယုံကြည်မှုကိုရယူပါ
ISO မှ USB stick - အကောင်းဆုံးအခမဲ့ကိရိယာ ၃ ခု
ဆော့ဝဲနှင့်၎င်း၏ source code ကို
Windows မှတဆင့်ရုပ်ရှင်များဖန်တီးပါ၊ ကွဲပြားသောအစီအစဉ်များဖြစ်နိုင်သည်
WLAN မှအချက်ပြကိုထိရောက်စွာချဲ့ထွင်ပါ၊ နောက်ဆုံးတွင်ပိုမိုအကွာအဝေးရှိသည်
ချိတ်ဆက်မှု၊ အင်တာနက်မရှိ၊ ဘာလုပ်ရမလဲ။
Fiber optic လိုင်း - မြန်နှုန်းအလွန်နှေးသည်
ခြားနားချက်တစ်ခုနှင့် Search Engine optimization
USB Stick ပါ USB stick ကိုထုတ်ပါ USB stick ကို bootable လုပ်ပါ USB stick ကို format လုပ်ပါ usb-stick ကိုပြုပြင်ပါ usb-stick ကိုစမ်းပါ USB stick ကိုအသိအမှတ်မပြုပါ usb ချောင်းများပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ခြင်း